Wararkii ugu danbeeyey ee dhexdhexaadinta Mali
Wafdi ka socda dalalka Galbeedka Afrika oo uu hogaaminayo Madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa Sabtida maanta ah gaaray magaalada caasimada ah ee Bamako si ay ula kulmaan taliska millatariga ee ku qasbay madaxweeynihii dalka Mali, Ibrahim Boubacar Keita in uu iscasilo.
Xubnaha Ururka Dhaqaalaha ee Wadamada Galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa sidoo kale la kulmi doona madaxweynaha la eryay Keita, saraakiisha dowladda iyo kuwa militariga ee ay xireen askarta afgenbiga sameysay, sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay ilo wareed ka tirsan ECOWAS.
Booqashada ergadan ayaa imaanaysa maalin uun ka dib markii kumannaan kun oo dad ah ay isugu soo baxeen caasimada Mali si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidamada militariga.
Bannaanbaxa ka dhacay magaalada Bamako ayaa mudaaharaadayaasha qaarkood waxa sitteen boorar ay ku xardhan yihiin Guddiga Qaranka ee Badbaadinta Dadka oo ah magaca ay la bexeen askarta afgenbiga sameysay.
Waxa ay sidoo kale banaanbaxayaashu dhalleeceeyeen tallaabada ay ECOWAS ku canbaareysay afgambiga iyo xiritaanka xuduudaha Mali ee dalalka dariska ah ee ka tirsan 14-ka xubnood ee ururkan dhaqaale ee mideeya dalalka Galbeedka Africa.
Hogaamiyaasha ciidamada milatariga ayaa Jimcihii sheegay in ay dib u fureen xuduudaha cirka iyo dhulka ee dalkaasi.
Keita iyo ugu yaraan dhowr iyo toban sarkaal oo kale ayaa Talaadadii ay qabteen ciidamada militariga, waxaana loo kexeeyey xarun tababar oo ay leeyihiin ciidamadu oo ku taal magaalada Kati, oo qiyaastii 15-kilometer u jirta caasimadda.
Keita, oo gelinkii danbe ee Talaadadii kaga dhawaaqay telefishanka qaranka inuu iska casilay xilkii madaxweynenimo ayaa dib loogu celiyay caasimadda, halkaas oo lagu soo rogay xabsi guri.
Hogaamiyahan 75 jirka ah ayaa loo ogolaaday in uu la kulmo dhakhtarkiisa gaarka ah, ehelladiisa iyo saraakiisha howlgalka Qaramada Midoobay ee dalka Mali.
Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo qeybaha kale ee beesha caalamka ayaa ayaa canbaareeyey xukun ka eryidda Keita.
Dalka Mali ayaa wajahaya caqabado waaweyn, iyaoo kala bar 19 milyan ee qof ee dalkaasi ay ku nool yihiin xaalad saboolnimo ah. Dalkan ku yaalla Galbeedka Africa ayaa sidoo kale wajahaya kala qeybsanaan qoomiyadeed oo qotodheer iyo hanjabaado kaga imanaya kooxaha jihaadiyiinta ah ee waqooyiga dalkaasi.